ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆိုတာဘာလဲ - Worldwide God of God Switzerland
ဆောင်းပါး > အသက်တာ၏စကားပြောသော > ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး - ကဘာလဲ?
အထူးသဖြင့်ခရစ်ယာန်အသစ်များသို့မဟုတ် visitors ည့်သည်များနားမလည်နိုင်သည့်ဝေါဟာရများကိုတစ်ခါတစ်ရံအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ထံလာပြီး“ ပြန်လည်သင့်မြတ်ခြင်း” ဟူသောစကားလုံးအားရှင်းပြရန်ကျွန်ုပ်အားမကြာသေးမီကပေးခဲ့သောတရားဟောချက်အပြီးဝေါဟာရများကိုသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းသတိပေးခဲ့သည်။ ၎င်းသည်မေးခွန်းကောင်းတခုဖြစ်ပြီးလူတ ဦး တွင်ထိုမေးခွန်းရှိပါက၎င်းသည်အခြားသူများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးဆိုတဲ့သမ္မာကျမ်းစာအယူအဆကိုကျွန်တော်အပ်နှံချင်တယ်။
ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်ရန်ဘယ်သောအခါမျှမဟုတ်ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ပေါလုပြောခဲ့သလိုပဲဘုရားသခင့်စိတ်ကိုမဟုတ်ဘဲလူတွေရဲ့စိတ်ကိုခွဲခြားထားတယ်။ လူတို့၏ကင်းကွာခြင်းကိုဘုရားသခင်တုံ့ပြန်ခြင်းသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကငါတို့ကိုရန်သူဖြစ်ပေမဲ့ငါတို့ကိုချစ်တယ်။
Paulus sagt uns, dass es damit nicht aufhört: „Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu…“ (2. ကောရိန္သု 5,18-19) ။
Ein paar Verse später schrieb Paulus, wie Gott in Christus die ganze Welt mit sich selber versöhnt hat: „Denn es hat Gott wohl gefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz“ (Kolosser 1,19-20) ။
ဘုရားသခင်သည်လူသားများအားလုံးကိုသခင်ယေရှုအားဖြင့်မိမိနှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်တန်ခိုးတော်မှဖယ်ထုတ်ခြင်းခံရသည်မဟုတ်။ အသက်ရှင်ခဲ့ဖူးသူအားလုံးအတွက်ဘုရားသခင့်ပွဲတော်စားပွဲတွင်ထိုင်ခုံတစ်ခုထားရှိသည်။ သို့သော်ဘုရားသခင်ကသူတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ခွင့်လွှတ်ခြင်း၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုလူတိုင်းမယုံကြပါ။ ခရစ်တော်၌သူတို့၏ဘဝသစ်ကိုလက်ခံခြင်း၊ ခရစ်တော်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးသောမင်္ဂလာဆောင် ၀ တ်စုံများကို ၀ တ်ဆင်ခြင်းနှင့်စားပွဲတွင်နေရာချထားခြင်းများကိုလူတိုင်းမယုံကြပါ။
ထို့ကြောင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည်ဘုရားသခင်၏သွေးအားဖြင့်ဘုရားသခင်အားလောကီသားနှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်စေပြီး၊ လူသားအားလုံးလုပ်ဆောင်ရမည့်အရာသည်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ရန်၊ နောင်တယူပါ၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုထမ်း။ ယေရှုနောက်သို့လိုက်လော့။
ထို့အပြင်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသောသတင်းဖြစ်သည်။ သူ၏ ၀ မ်းမြောက်သောလုပ်ငန်း၌ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ။